Nezvedu - Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd.
Kambani yedu yakazvipira kuburitsa mhando yepamusoro inotonhora uye inopisa compress zvigadzirwa
Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd.chinhu chitsva chekitekinoroji. Iyo kambani yakazvipira kuvandudzwa kweiyo gel chando kurongedza zvigadzirwa zvehunhu hwega / hutano uye zvekurapa / zvemitambo kuputira / kumba kuchengetwa kwemazuva ese kunozorodza kupisa uye kutonhora kurapwa kubva 2012.
Isu tinopa zororo, kurapa kwemuviri uye rubatsiro rwekutanga muhupenyu, Zvigadzirwa zvinosimbiswa neSGS, FDA, CE, REACH, AZO, PROP65, fekitori ine BSCI odhita, isu tine zviitiko zvakabatana neLIDL, ALDI, Wal-mart neDisney.
Iyo kambani ine akawanda anopisa anotengesa zvigadzirwa senge gel chando kurongedza, gel bead mask, ibvi wrist ankle chiuno chibooreso ne inopisa inotonhorera chando kurongedza, kutonhora kurapa masokisi, miriwo microwave kupisa pad, yekurapa chando bhegi, iyo inogona kuve yakawanda
inoshandiswa mukupisa uye kutonhora compress kurapwa, zvemitambo Hutano, amai nemwana kuchengetwa, nezvimwewo Isu tinoteerera kuchisungo che "kuenderera kwekusika uye kugutsikana kwevatengi" uye nekutendeka tariro yekuchipa nemutengo wekukwikwidza wehupenyu hwakanaka.
Tine rako reR & D department rinogona kutsika zvigadzirwa zvinoenderana neyako pfungwa, laser yekucheka muchina kuverengera chimiro chaicho, kudhinda kweVV kunogona kuita akawanda-mavara mapatani, ruoko rwakagadzirwa muforoma inoita yakasimba hupenyu hwehupenyu hwezvigadzirwa zvako, 120 vashandi mhinduro yekuendesa. Chinangwa chedu ndechekupa mhando-yepamusoro, inodhura-zvigadzirwa nekukurumidza kuendesa uye basa rakanakisa.
Ese mapakeji echando anoenda kudzvanya kuyedza uye kuzviongorora pamberi pepakeji, iyo isiri-chepfu gel rakanamwa muPV, EVA, TPU inogona kudonha mushure mekunyanyisa kupisa kana kumanikidza, izvo zvakashata kune ruzivo rwevatengi, fekitori yedu inoita zvese izvi pasi pekutonga, mhinduro ye Ose chando mapaketi.
Yedu Export Mugove
Jiangsu Huanyi Industrial Co, Ltd. yakazvipira kugadzirwa kwemhando yepamusoro inotonhora uye inopisa compress zvigadzirwa. Iyo kambani inobatanidzwa mukugadzirwa kwechigadzirwa, kuvandudza uye kugadzira (iyo nzira yese inogona kunwa yakachena mvura yakanatswa) uye kutengesa. Nebasa rakaoma revashandi vese vehunyanzvi uye vekutengesa, kambani yakabudirira kupa huwandu hukuru hwezvinhu zvemhando yepamusoro zvinotonhora uye zvinopisa kune vatengi kumba nekune dzimwe nyika.
Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa pasi rese, nyika huru nematunhu zviri 40% muEurope, 30% muAmerica, 15% muJapan uye 5% Korea, uye 10% mune dzimwe nyika kana matunhu Iyo kambani yanga ichishumira vatengi ne zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mutengo unonzwisisika, kuendesa nguva uye mukurumbira wakanaka. Tinotarisira nemwoyo wose kushandira pamwe vatengi kumba uye kunze. Nekuedza kwevashandi vese pasirese, isu tichava bhizinesi rinotungamira muindasitiri uye pamwe chete tinogadzira ramangwana rakajeka rekutonhora uye kupisa compress indasitiri!
Dzimwe nyika nematunhu
Iva nhengo yemhuri pano, vanogona kunakidzwa neraibhurari uye nzvimbo dzekusimba kuti dzive noutano hwakaenzana nezvigadzirwa zvedu!
Tinogamuchirwa kushanyira fekitori yedu kana dumba redu gore rega rega paFairs uye kuratidzira.
Iva nehurukuro nesu, iwe uchawana yako yakakodzera inopisa uye inotonhora kurapwa echando mapake zvigadzirwa!